I-Terraforming: kuyini, izici namaplanethi ku-terraform | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Siyazi ukuthi umuntu uqeda imithombo yemvelo yomhlaba wethu ngezinga elikhulu futhi ukuphela kwezinhlobo zethu kuphakanyiswa kaningi ngenxa yokucekelwa phansi kweplanethi yethu. Ngalesi sizathu, kunenkulumo ye- ukubhabha. Imayelana nokulungiswa kwamanye amaplanethi ukuze kube nezimo ezifanele zokuhlala abantu. Imvelaphi yokwakheka komhlaba yenzeke emlandweni wesayensi, kepha ngenxa yokuthuthuka kwesayensi, emphakathini wesayensi kuyenzeka.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi yiziphi izinyathelo zokwenza i-terraforming nokuthi yimaphi amaplanethi angalungiswa ukuze ahlale kuwo.
1 Ukwakhiwa komhlaba
2 Amanye amaplanethi we-terraform
3 I-Terraforming ye-Mars
4 Phila kumars
Iqiniso lokukhuluma nge-terraforming lifingqiwe ekufuneni iplanethi nokulungisa umoya wayo ukuze ikwazi ukuhlala abantu. Uma iplanethi seyakhiwe umhlaba ungakhuluma ngezindawo zokuhlala ezingasetshenziswa ngabantu. Akubalulekanga nje kuphela ukwazi nokuvumelanisa isimo sendawo nendawo okuhlala kuyo, kepha nezinhlaka zokwakheka komhlaba nezokuziphatha ukuze zikwenze zifane kakhulu nomhlaba wethu. Elinye lamacala ajwayelekile okwedlula komhlaba okwenziwa umphakathi wesayensi nomphakathi jikelele yiMars.
Kunababhali abaningi abadumile abaphakamise ukuguqula iMars ibe yizwe eliguqulelwe ekusindeni kwabantu. Kukhona namanye amaplanethi angahle asungulwe ngomumo futhi avumelane nezimo kumuntu. I-Terraforming yisinyathelo esibalulekile ekuthuthukisweni nasekusindeni komuntu njengesilwane. Ake sibone ukuthi yimaphi amaplanethi angahlelwa. Into enengqondo ukuyenza ukuqala ngalawo maplanethi kuhlelo lwelanga eliseduze kakhulu noMhlaba. Yize iVenus iyiplanethi eseduzane, izinga layo lomfutho womoya liphezulu kakhulu futhi linamafu e-sulfuric acid egxilile namazinga okushisa aphezulu. Lokhu kwenza inselelo yokuhlala eVenus iphakeme kakhulu.
Okulula futhi okungokwemvelo ngokwengeziwe kungaba ukuqala ngeMars.
Amanye amaplanethi we-terraform
Imidondoshiya yegesi esimisweni sonozungezilanga yilezi UJupiter, u-Uranus, uSaturn noNeptune. Banenkinga esobala yokuthi abanayo indawo eqinile yokuhlala ngaphandle kwengqikithi. Lokhu kubenza babe amaplanethi angacatshangelwa ngisho nokwakheka komhlaba.
Amaplanethi asolwandle acishe abunjwe ulwandle olulodwa noma atholakala kakhulu kuzisetho eziqanjiwe zesayensi. Ku-movie ye-Interstellar noma inoveli uSolaris ungabona ukuthi iplanethi ingumhlabathi wasemhlabeni kanjani futhi ayikwazi ukwenziwa ikoloni. Lokhu kungalungiswa ngendlela elula ngokungafani namaplanethi anegesi, kepha kusengaba izindleko eziphakeme. Kodwa-ke, la maplanethi awazinzile ngokwendawo yesimo sezulu njengoba engenawo uqweqwe lomhlaba oluvelile futhi ayikho imijikelezo ye-silicate ne-carbonate.
Eplanethi yolwandle ukuhwamuka kunomkhawulo kanye nesikhutha isuswa ngempumelelo ulwandle uqobo kodwa ayikhishwa yi-lithosphere. Lokhu kubangela ukuthi iplanethi ipholile ngejubane elikhulu futhi ingene esikhathini seqhwa futhi ngokuhamba kwesikhathi nelanga eliqhakazile ukukhuphuka kukhuphuke kakhulu ukuze kwakheke umhwamuko wamanzi futhi kuncibilikise iqhwa. Amaplanethi ase-Oceanic ayashintshashintsha kakhulu futhi awaziwa neze ngenqubo yokwakheka komhlaba.
Ngesizathu esishilo ngenhla, elinye lamaplanethi ahloselwe ukwakheka komhlaba ngabantu yiplanethi iMars. Kulezi zinsuku Kunamaphrojekthi amabili abucayi kakhulu ohambo oluya eMars, yize kungenzelwa ukwakhiwa komhlaba. Lokhu kukhombisa ukuthi iplanethi iyaqhubeka nokuvusa isithakazelo esikhulu kubantu. Le planethi efana noMhlaba noma iVenus ibe nomlando wokuma komhlaba. Omunye wemininingwane ebaluleke kakhulu ukuthi kwakukhona yini amanzi esikhathini esedlule nokuthi ayengakanani amanzi. Kuyisici sokuthi ngaso sonke isikhathi ukuqiniseka ukuthi cishe kwakukhona nokuthi izilwandle zahlala cishe ingxenye eyodwa kwezintathu zomhlaba.
Njengamanje iyindawo engenamusa ngokusobala ngoba umoya wayo omncane uyenza ibe nengcindezi eyinkulungwane yengcindezi esemkhathini ekhona emhlabeni wethu. Esinye sezizathu zokuba khona komoya omncane onje kungenxa ye- amandla adonsela phansi afinyelela kumanani aphansi ngo-40% kunasemhlabeni ngakolunye uhlangothi ukungabikho kwemagnetosphere. Kumele kubhekwe ukuthi i-magnetosphere iyona eyenza izinhlayiya zomoya welanga zingaphambukiswa futhi zingathinta umkhathi. Siyazi ukuthi lezi zinhlayiya zingabhubhisa kancane kancane umkhathi.
Iplanethi esiyibonako ayinayo i-magnetosphere futhi inomoya ominyene kwazise amandla ayo adonsela phansi makhulu kakhulu. Izinga lokushisa olwandle lishintsha kakhulu futhi lingafinyelela amanani wamakhulu ama-degrees ngaphansi kuka-zero kuya kuma-30 degrees ezindaweni ze-equatorial. Imimoya ngokuvamile ayinamandla kakhulu futhi izivunguvungu zothuli zenzeka kaningi. Iziphepho ezinjalo zothuli zingagubuzela yonke iplanethi.
Ngaphandle kokuthi sithola iplanethi enomkhathi omncane, kulula ukuthola isivinini somoya esifinyelela ku-90 km / h. Ubuningi buphansi kakhulu kwiMars kangangokuba kunokwehluka okuncane kwengcindezi. Enye into eyenziwe ukwenziwa kwamandla ku-Mars yikhono lomoya lokuhambisa izigayo. Lo mthamo ungancishiswa kakhulu ngisho nokuthatha isivinini sesiphepho sesihlabathi futhi esidalwe ukuminyana kwabantu.
Umbala obomvu obomvu weplanethi iMars kungenxa yokuba khona kwama-iron oxides afana ne-limonite ne-magnetite emoyeni. Lokhu kwenza ububanzi bezinhlayiya bube bukhudlwana kunobude bokukhanya obungena kwiplanethi futhi bubonakale emoyeni. Okwe-oxygen umusi wamanzi osemkhathini awukho nhlobo umkhondo, ngoba ukwakheka komkhathi kunjalo nge-95% noma ngaphezulu isikhutha, kulandele i-nitrogen ne-argon.
Ukungabikho kwamandla kazibuthe kubanga imisebe ye-cosmic ishaye iMars, ngakho-ke izinhlayiya zomoya welanga nezinga lemisebe ziphakeme kakhulu kubantu. Umuntu wayezophila ngaphansi komhlaba.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokwakheka komhlaba kweMars nezici zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ukwakhiwa komhlaba